China Biometer Laboratory Numral General Type Sonic Cleaner စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |BIOMETER
Biometer ဓာတ်ခွဲခန်း ဂဏန်း အထွေထွေ အမျိုးအစား Sonic Cleaner
1. ဒစ်ဂျစ်တယ် display နှင့် ultrasonic သန့်ရှင်းရေးအချိန် ဆက်တင်
2. နိုးထချိန် နှစ်သစ်ကို ပြသပါ။
3. အချိန်အတိုင်းအတာ- 1-600 မိနစ်ချိန်ညှိနိုင်သည်။
4. အထူးသံမဏိတောင်းဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး အသံအဖုံးကို လျှော့ချပါ။
5. အခွံနှင့်အဖုံးကို stainless steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
6. Single-chip controller ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော စက်ပစ္စည်း
7. ပါဝါပိတ်ပြီးနောက် နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှု ကန့်သတ်ချက်များကို မှတ်ဉာဏ်တွင် သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
လက်ဝတ်ရတနာ စျေးကွက်များ လက်လီ/လက်ကားရောင်းချမှု-အချောထည်ပစ္စည်းများ၊ နာရီ၊ ကွင်းဆက်၊ လက်စွပ်စသည်တို့ကို အပိုင်းအစ သို့မဟုတ် အစုလိုက်အလိုက် သန့်ရှင်းရေးအတွက် စားပွဲတင်မော်ဒယ်များ။
လက်ဝတ်ရတနာထုတ်လုပ်ရေး- အထွေထွေ လက်ဝတ်ရတနာ သန့်ရှင်းရေး။ကာစ်ပြီးနောက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအား အကန့်အသတ်မရှိ ဖယ်ရှားခြင်း။နီရဲခြင်း နှင့် အခြားသော ပွတ်တိုက်ခြင်း နှင့် အရောင်တင်ဒြပ်ပေါင်းများကို ဖယ်ရှားခြင်း။ကွင်းဆက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆီ/ဆီများကို ဖယ်ရှားခြင်း။
သွားဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်းများ-ဓာတ်ခွဲခန်း သို့မဟုတ် ရုံးခန်းအတွင်း ချိန်ညှိနိုင်သော ပါဝါဆက်တင်ဖြင့် အလှကုန်/ပြင်ဆင်နိုင်သော ပါးစပ်များကို နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် အစွမ်းကုန် ကိရိယာများကို သပ်ရပ်စွာ သန့်ရှင်းရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဆေးရုံ/ခွဲစိတ်ခန်း-ခွဲစိတ်ကိရိယာများ၊ အတုအပ အစိတ်အပိုင်းများ စသည်တို့ကို အကြွင်းမဲ့ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပါ... ပိုးသတ်ခြင်း ဓာတုဗေဒ ပစ္စည်းများ ကို ကရားများ ထဲသို့ ထည့်နိုင်ပြီး တိုင်ကီထဲတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
တက်တူး-ဆေးထိုးအပ်များ၊ နော်ဇယ်များ၊ စုတ်တံများ၊ ဇကာများကို သန့်ရှင်းပါ။
scientz sonic cleaner အတွက် 12 လ အာမခံ။
အာမခံအချိန်အတွင်း နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက အစားထိုး အစိတ်အပိုင်းများကို အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ရရှိနိုင်သည်။
1. သင့်မေးမြန်းမှုကို အလုပ်ချိန် 24 နာရီအတွင်း အကြောင်းပြန်ပါ။
2. အတွေ့အကြုံရှိသော ဝန်ထမ်းများသည် သင့်မေးခွန်းအားလုံးကို အင်္ဂလိပ်လို ကျွမ်းကျင်စွာ ဖြေဆိုပါ။
3. ပမာဏကြီးမားပါက OEM ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
4. ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးအတွက် အလွန်ယှဉ်ပြိုင်မှုကို ပေးဆောင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်များသည် ကျယ်ပြန့်ပြီး တင်းကျပ်သောစမ်းသပ်မှုနှင့် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို ခံယူထားပြီး ဝယ်ယူသည့်ပစ္စည်းတိုင်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရည်အသွေးစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေပါသည်။ ၎င်းသည် sonic cleaner အတွက် လုံခြုံပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးဖြစ်သည်။
ယခင်- ဇီဝမီတာ အပူပေးသည့် ကြိမ်နှုန်းနှင့် CNC Ultrasonic သန့်ရှင်းရေးစက်
နောက်တစ်ခု: Biometer Single Frequency Type CNC Heating Function Ultrasonic Cleaners များ
Biometer ဓာတ်ခွဲခန်းအမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိနိုင်သော Constant T...
ဇီဝမီတာ အပူချိန်ထိန်းညှိ တုန်ခါမှု မီးဖုတ်စက် ဒက်စ်ချ...
ဇီဝမီတာဓာတ်ခွဲခန်း အပူချိန်ထိန်းညှိ တုန်ခါမှု စက်ရုံ...
ဇီဝမီတာဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ဆူညံသံနည်းသော အပူချိန်ထိန်းညှိ...
Biometer နှစ်ထပ်အလွှာ Large Capacity Floor အမျိုးအစား...
Biometer ဓာတ်ခွဲခန်း အပူချိန်ထိန်းညှိ လှုပ်ယမ်းခြင်း မီးဖိုဆောင် Sha...